I-TrovaWeb ingena kunethiwekhi enkulu yezinkampani zaseSicily futhi iphinde iqinisekise iqiniso eligcwele amathuba kanye namandla amakhulu.
Enye into ebaluleke kakhulu ingeziwe kuhlaka lokusebenzisana okuqalwe ngalo I-TrovaWeb ngamabhizinisi futhi Ubuhle base-Italy. Inhlangano a ISicindustria kukhomba elinye inyathelo eliya phambili ekwakhiweni kwe Network okuhlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezengeziwe ezisebenzayo nezinokwethenjelwa ezinkampanini.
ISicindustria yasungulwa ngo-1944 futhi imele umfelandawonye wokuqala wesifunda we Uhlelo Confindustria. Namuhla ISicindustria yinhlangano enkulu kunazo zonke ye-System Territory emahhovisi okusebenza nawokumela ezifundazweni zase-Agrigento, eCaltanissetta, e-Enna, eMessina, ePalermo, eRagusa naseTrapani. Uhlelo lolu lufaka nabosomabhizinisi abasebasha abanabaningi gamaqembu omkhiqizo: I-Industria, Ukunakekela impilo, I-Turismo, Ingqalasizinda Nezokuhlinzekela, amandla, Imvelo, i-Agribusiness, Izinsizakalo.
Inethiwekhi yeSisilia yokuthuthukisa osomabhizinisi bendawo
ISicindustria imele okwangempela Inethiwekhi yamabhizinisi aseSicily namaqiniso okuhweba futhi wazalwa enezinhloso eziningi. Okokuqala, ihlose ukukhuthaza ukuthuthukiswa kwezinkampani ezihambisana nokuxhaswa, ukuqeqeshwa, usizo nokuvuselelwa. Kepha ISicindustria kungaphezulu kakhulu: umbono weNhlangano ukukhuthaza ukusatshalaliswa kosiko lwebhizinisi nemakethe. Futhi ukuthuthukiswa kwe indawo inani elizizwe kakhulu kusuka Inhlangano Yezizwe Yenhlangano Yezizwe nangabo bonke abaHlanganyeli abayingxenye yawo.
Indlunkulu yeSicily yeConindustria ekhuthaza ukuthuthukiswa kwamabhizinisi endawo
Qinisekisa amanani webhizinisi laseSicain e ukuthuthukisa izwe leSisilia uphakathi kwezinhloso zokuqala zazo zonke izinto zebhizinisi ezikuyo Inethiwekhi. Futhi futhi: ikhuthaze inqubekela phambili kwezomnotho kanye nesibopho senhlalo yendawo, ukusekela nokuvikela indima yeumkhakha wendawo. ISicindustria isekela izinkampani ekuxazululeni kwezinkinga zansuku zonke ezivimbela impilo yebhizinisi, ngenxa yobudlelwano obuqinile nezikhungo, abaphathi bendawo nokuphatha. I-TrovaWeb, esingavele sithembele kubambiswano obuningi kulo lonke elase-Italiya, ngaleyo ndlela ithole omunye umlingani oyigugu wayo amasu entuthuko yezenhlalo kanye nosomabhizinisi. Ngaphezu kokuqinisa amakhono ayo angaphakathi namathuluzi anawo. Ngenxa yalesi sivumelwano esibalulekile, I-TrovaWeb izokwazi nokunikela eyakho ngezimo ezizuzisayo ikakhulukazi izinsiza zokubonakala kwedijithali kuwo wonke amalungu eSicindustria.
Izifundo zokuqeqesha, ukuvuselela kanye nokudlulisa kokwazi okusha
Abazihlanganisa ISicindustria bahlose ukuvela futhi bathuthukise imikhiqizo yabo kanye nezinsizakalo zabo ngokusebenzisa amathuba amaningi okukhula anikezwa yiNhlangano Yezizwe. Ngenxa yabaningi izifundo zokuqabula nokuqeqeshwa, ISicindustria inika amalungu ayo ithuba lokuthola eyodwa inethiwekhi ehlanganyelwe yolwazi namakhono. Amathuba amaningi okukhula ahlala njalo ehlose ukwenza izinto ezintsha nobuhle: ISicindustria inikeza lokhu nokunye okuningi. I-TrovaWeb ngakho-ke usukulungele namhlanje ukuhlanganisa konke okungahle kuthathwe kulo msebenzi wokubambisana nokwenza kutholakale kuzo zonke izinkampani ezingezakhe Isifunda sokuhlela online.
Tags: Ukubambisana kwe-Getweb sicindustria ukuqala okuhle